Tag: Java | Martech Zone
Bugsnag: Yechokwadi-Nguva Bug Kuzivisa
Muvhuro, June 10, 2013 Muvhuro, Kukadzi 1, 2016 Douglas Karr
Asi zvakare chimwe chikonzero nei tichida kubata WordPress paFlywheel ndiko kuwana kuri nyore kwePP matanda kutipa ruzivo rwezvikanganiso mumitambo yevatengi vedu nemapulaggi atiri kusimukira mairi. Kunyange izvi zvakanaka pakubudirira kweWordPress, vazhinji vanogamuchira havapi nyore kuwana log mafaira uye zvikanganiso pane mamwe mapuratifomu ekugamuchira. Bugsnag ipuratifomu yakakura yeSawaS inozvionera otomatiki tsaona mumaapps ako akagadzirwa muRuby, Python, PHP, Java, Android, iOS,
Quark Inosimudzira Inopa Hybrid Solution Yako Bhizinesi Ekutsikisa Zvinodiwa
China, November 26, 2009 China, November 26, 2009 Douglas Karr
Quark yatanga yakavhenganiswa webhu saiti iyo inosanganisa matemplate ehunyanzvi pamwe neiyo nyowani desktop software, Quark Kukurudzira. Iyo yakanaka inonakidza modhi… dhawunorodha Windows-based application uye unogona kutanga kugadzirisa uye kurodha zvako zvekushambadzira zvinhu. Kana zvishandiso zvako zvangoiswa, unogona kuita kuti zvinyorwe uye zvigoverwa munzvimbo yako kuburikidza neneti yevaparidzi. Iyo sevhisi inokutendera iwe kugadzira makadhi ekugadzwa, mabrochure, makadhi ebhizinesi, makuponi, data mapepa, mavhopu, mapepa, tsamba yematsamba uye maposadhi